TCDD wuxuu uqalmay shahaadada Zero Waste | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTCDD ayaa uqalma inay hesho Shahaadada Zero Waste
19 / 02 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD
tcdd waxaa lagu siiyay qashin qashin ah
Mustaqbal aamin ah oo leh deegaan cagaaran oo nadiif ah oo aan ugu tagno carruurteenna, yareynta qiiqa kaarboonku wuxuu noqday mid lama huraan ah.
Si loo joojiyo ama loo yareeyo kororka kuleylka adduunka, istiraatiijiyado cusub waa in lagu soo saaraa duulimaadka gaaska halka tamarta ugu badan lagu isticmaalo. Qeybta ugu weyn ee isbadalkan waa wadada tareenka, oo ah deegaanka jawi wanaagsan oo gaadiidka ah.
kuwaas oo hirgaliyey adeegsiga tiknolojiyada cusub in ay gacan ka hoos u kaarboonka goobta shaqada TCDD Turkey ee 102 "Hirgelinta Zero Qashinka" n maray.
Mashruuca “Zero Waste Application”, oo ah hawlihii ay bilaabeen Abriil 2019, TCDD waxay sameysay 90% horumar waxayna tusaale u tahay hay'ado badan. Mashruucan, kaas oo 45 kun oo tan oo qashin dib loo isticmaali karo wadarta laga helay, 17 geed ayaa lagu badbaadiyay 289 tan oo warqad ah. 13 lt saliid ayaa laga helay 204 tan oo caag ah. 2 tan oo shidaal ah areherada waxaa laga helay 1.700 tan oo saliida qashinka qudaarta ah oo ay ka keeneen shaqaalaha machadka.
Mashruucan, kaas oo 45 kun oo tan oo qashin dib loo isticmaali karo wadarta laga helay, 17 geed ayaa lagu badbaadiyay 289 tan oo warqad ah. 13 lt saliid ayaa laga helay 204 tan oo caag ah. 2 tan oo shidaal ah areherada waxaa laga helay 1.700 tan oo saliida qashinka qudaarta ah oo ay ka keeneen shaqaalaha machadka.
Sida ku xusan Qaanuunka Zero Waste Regulation ee lagu daabacay Jariidada Rasmiga ah ee 12ka Juulaay 2019, waxay ku khasbanaatay in Hay'adaha iyo Ururada Dadweynaha la dhaqan geliyo illaa 01ka Juun 2020 iyo helitaanka Shahaadada Zero Waste.
Fuliyay in lala Wasaaradda Degaanka iyo Magaaleynta in meesha ugu horeysa ee mashruucan dhismaha maamul muddo gaaban TCDD, kaas oo la bilaabay in Turkey ay gaareen 102 ganacsiga guud ahaan.
Iyada oo la adeegsanayo mashruuca “Zero Waste Application”, oo loo qorsheeyay in laga hirgaliyo dhammaan goobaha shaqada ee TCDD ilaa bisha Juun, saaxiibtinimada bey'adeed ee hay'addu waa la keenay.
In kasta oo qashin kale oo badan sida warqad, baakado, caag, dhalo, saliida qudaarta ayaa lagu soo ururiyaa 10 qaybood, way kala go'een oo waxay ku kaydsan yihiin xarun waxaana loo geeya xarumaha beddelka. Intaa waxaa u dheer, qashinka la soo ururiyey waxaa lagu duubay Nidaamka Macluumaadka Deegaanka ee Iskujira.
Wasaaradda Deegaanka iyo Qorsheynta Magaalooyinka sameeyey kormeerka 6-dii February, 2020 laga bilaabo taariikhda dokumentiga waxay xaq u leeyihiin shaqaalaha Zero Qashinka TCDD, ayaa sheegay in ujeedada abuuraya nadiif ah iyo Turkey si ay qashinka qiimaha xilka dhaqaalaha keeno.
Waxaan sii wadaynaa inaan la shaqeyno mashruuca Zero Waste, oo ah qodobka ugu weyn ee deegaanka u fiican, nadiif ah, gaadiid tayo leh oo tareennada dalkeenna iyo muwaadiniinta lehna leh yoolal sarre.
IZBAN ayaa ku guuleystay abaalmarinta
Wiilku wuxuu ku dhuftay tareenka inuu u helo rootiga saxanka
Shiinaha ayaa maamulaya si ay u helaan shaqo tareen oo Afrika ah
ITU waxay bilaabeysaa in ay ardayda ka qaadaan barnaamijka mashruucyada tacliinta ee tacliinta qalinjabinta
Izmir BB 17 waxay qorsheyneysaa in ay soo iibsato tareenka shan-tareen ee tareenka yar yar
Dentur wuxuu ujeedkiisu yahay inuu soo celiyo rakaabkii Marmaray oo leh mashiinnada VIP